सेनाले भूतपूर्व सैनिकलाई स्वरोजगार बनाउन साढे चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
सेनाले भूतपूर्व सैनिकलाई स्वरोजगार बनाउन साढे चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाली सेनाले भूतपूर्व सैनिकलाई स्वरोजगार बनाउन साढे चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। अवकास सैनिकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अबको पाँच वर्षभित्र यो रकम लगानी गर्ने तयारी गरिएको हो।
यसबाट करिब ४५ हजार पूर्व सैनिकलाई स्वरोजगार बनाउने योजना सेनाको छ। यसका लागि सैनिक कल्याणकारी कोष मार्फत पूर्व सैनिकलाई सहुलियत ब्याजमा ऋण प्रदान गरिने अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।
सेवामा रहँदाको सीप र ज्ञान अवकासपछि काम नलाग्ने तथा पेन्सनले मात्र जीविका चलाउन मुस्किल भइरहेको गुनासो पूर्व सैनिकले बारम्बार गरेपछि उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिएको हो। विभिन्न सीप सिक्न तथा व्यावसायाम आवद्ध गराई उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले यति ठूलो रमक लगानी गर्न लागिएको सेनाको भनाइ छ।
यस विषयमा छलफल गर्न सेनाले बिहीबार सुर्खेतमा भूपू सैनिकको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। सैनिक कल्याणकारी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत चित्रबहादुर गरुङले लघुवित्त कार्यक्रममार्फत साढे चार अर्ब रकम भूपू सैनिकलाई आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बनाउनका लागि लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अबको पाँच वर्षभित्रमा यो रकम लगानी भैसक्ने छ।
यसबाट देशभरीका करिब ४५ हजार पूर्व सैनिक स्वरोजगार बन्नेछन्। यो कोषमार्फत हालसम्म ३५ करोड एक लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको र करिब तीन हजार जना भूपू सैनिक स्वरोजगार बनिसकेको गुरुङले बताए।
पूर्व सैनिकलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम, कृषि तथा पशुपालन र अन्य व्यावसाय गर्न कोषले बैंकमार्फत सहुलियतमा ऋण प्रवाह गर्नेछ। लगानी नभएकै कारण पूर्व सैनिकका परिवारलाई जीविकोपार्जनमा समस्या भइरहेकाले यस्तो योजना अगाडि सारिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
काठमाडौंसहित देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा भारी वर्षा, मौसमविद्ले जारी गरे यस्तो चेतावनी
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५ औँ महासभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने
एउटा गाउँका ६० किसान मिलेर डेरी सञ्चालन
इलामका पाँच युवाहरुद्धारा कोरोना अस्पतालमा प्रयोग गर्न मिल्ने रोबोट निर्माण
पहिरो खस्दा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध
भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आसपास बस्ती बढाउँदै
स्थगित परीक्षा सञ्चालनबारे त्रिविले गर्यो यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय
नेपालमा उत्पादित अलैँचीलाई नेपालमै प्रशोधन गरिने
चीनले नाका प्रयोगका लागि अनुमति नदिँदा एक वर्षदेखि उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न अभाव
बिबाह अगाडि हरेक पुरुषले बोल्ने यी ८ झुट
बिहिबार १ असोज, २०७७
जिउँदै पतिको निधन भयो भन्दै श्रीमतीले छिमेकीलाई मलामी बोलाएपछि भयो बबाल !
२०० भन्दा बढी कैदी जेलबाट फरार, तीन जनाको मृत्यु
पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा खुला गर्नुपर्ने माग
आइपुग्यो नेपाल आफ्नै देशको रेल, नेपालले कतिमा किन्यो ? [ ८ तस्विर ]
कोरोना परीक्षण नगर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग